AMISOM oo dabooleysa door ay banneysay Dowladda Fadaraalka | KEYDMEDIA ONLINE
AMISOM oo dabooleysa door ay banneysay Dowladda Fadaraalka
Waxaa wali taagan xaaladdii bini’aadan-nimo ee ka dhalatay fatahaddii Wabiga Shabeelle, kaas oo barakac iyo burbur hantiyadeed u hor seeday, beeraley iyo xoolo dhaqato ku nool Shabeellaha dhexe.
JOWHAR, Soomaaliya - Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) ayaa sheegay in dadkii ay saameeyeen daadadkii ku dhuftay magaalada Jowhar ee koonfurta Soomaaliya, ay u qaybiyeen raashin iyo agabyo gargaar kuwaas oo loogu talagalay in wax looga qabto xaaladda xun ee soo food saartay shacabka gobolka Shabeellaha hoose.
Macow Caddow oo ah sarkaal ka tirsan xaafiiska xiriirka bulshada ee AMISOM, ayaa sheegay in agab gargaar oo isugu jira bariis, saliid, sonkor, bustayaal, baco, maro kaneeco iyo baaldiyo loo qeybiyay in ka badan 900 oo qoys oo barakacayaal ah, kuna nool meelaha ay aadka u saameeyeen daadadkii ugu dambeeyay.
Toddobaadyadii la soo dhaafay, roobab mahiigaan ah oo aan kala joogsi lahayn oo ka da’ay goballada Shabeellaha dhexe, iyo Hiraan ilaa buuraleyda Itoobiya, ayaa sababay inuu fataho, Wabiga Shabeelle, taasoo boqolaal qoys ku go'doomisay meelaha u nugul cudurrada ka dhasha biyaha iyo kaneecada.
Axmed Meyre Makaraan, gudoomiyaha gobolka Sh/dhexe ayaa sheegay in deeqdan ay waxbadan ka tari doonto wax ka qabashada xaaladaha degdega ah ee bini’aadanimo xili dadku wali ay la tacaalayaan dhibaatooyinkii uu u gaystay ayaxii sanadkii 2020, kaas oo baabi’iyay dalagyadii beeraha isla markaana abuuray cunno yarida hadda taagan.
Dowladda Fadaraalka Soomaaliya ayaa dhagaha ka fureysatay shacabka dan yarta ah ee ku tabaaaleysan gobolka Shabeellaha dhexe, kuwaas oo guryahoodii, duunyadoodii iyo dalaggoodiiba ay daadadku burburiyeen.